सरकार पास देउ, अलपत्र परेकालाई म घर पुर्‍याउछुँ : कुमार कट्टेल – Sandes Post
मुख्य पृष्ठ /News/सरकार पास देउ, अलपत्र परेकालाई म घर पुर्‍याउछुँ : कुमार कट्टेल
काठमाडौं / चर्चित हाँस्य कलाकार कुमार कट्टेल उर्फ जिग्रीले अहिले सामाजिक संजालमार्फत नै नेपाल सरकारलाई एक आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले अहिले लकडाउनका बेला अलपत्र परेका सबैलाई आफ्नो व्यक्ति खर्चले आफै गाडीको व्यवस्था गरी उहाँहरुको घरसम्म पुर्याउनका लागि आफुलाई पास बनाईअनुरोध गर्नु भएको छ ।
कुमार कट्टेलले सरकारको कार्यनीतिप्रति प्रश्न चिन्ह उठाएको पनि उक्त स्ट्याटसले बुझ्न सकिन्छ । उहाँले यस्तो बेला सरकारले मेरो यो अनुरोध स्वीकार गरी मलाई देश सेवा गर्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । कुमार कट्टेलले लेख्नु भएको स्ट्याटस आगाडी पढ्न सक्नुहुन्छ ।
तपाई त सरकारको नेतृत्त्व गरिरहेको कम्युनिस्ट पार्टिको अध्यक्ष सुनेको थिए , कम्युनिस्ट पार्टी त मजदुर र सर्वहाँरा बर्गको पार्टी हो । आज बिपत्तिमा गरीब, मजदुर हरु भोक भो-कै हिडेर घर गैरहदा तपाईं को पार्टी र सरकार गरीब र मजदुरको नै हो र ?
प्रश्न गर्न मन लाग्यो सरकार का बस , सेना प्रहरी का बस ,सरकारी प्लेन हरु सायद गरीब मजदुर हरुका लागी हैन रहेछन ।
जिल्ला-जिल्ला र स्थानिय तहको समन्वय को लागी मलाई पास उपलब्ध गराईदिनु होला। म मेरो व्यक्तिगत खर्च मा गाडी को व्यवस्था गरी फसेका गरीब र मजदुर को पहिचान गरी घर पुर्याई दिन्छु देश लाई परेको बेला सेवा गर्ने मौका दिनु हुन्छ भन्ने आस मा तपाई को भलो चिताउने नागरिक म !!
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘लकडाउन’लाई अझै कडाइ गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
उहाँले जोखिम बढ्दै गएकाले हिँडेरै गाउँघर जान लागेकालाई त्यहीँ रोकेर खानेबस्ने व्यवस्था मिलाउन तथा यस्तो महामारीको बेला उदारता नदेखाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ । बैठकमा मन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका सबै प्रमुखहरुको सहभागित थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बैठकमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणविरूद्द जारी लकडाउन र यसको कार्यान्वयनका बारेमा एकीकृत छलफल र समीक्षा भएको जानकारी दिनुभयो ।